5 Best Free Photo Editor maka Windows dezie Photos on PC
> Resource> Windows> Top 5 Free Photo Editor maka Windows - Best Free Photo Editors
Ọ bụrụ na ị na-adịghị na afọ ojuju na gị wuru na-foto nchịkọta akụkọ gị Windows usoro, ma ọ ike imeli ịzụta azụmahịa foto edezi software, mgbe ahụ, i nwere ike na-agbalị ụfọdụ free foto nchịkọta akụkọ maka Windows ịmepụta na dezie oyiyi. Free foto edezi software gụnyere ebe a na-enweghị mgbochi na nwere ike ịbụ ike karịa azụmahịa foto edezi software. Dị nnọọ download ndị kasị mma free foto edezi software maka Windows na retouch foto gị ozugbo.
Best free foto nchịkọta akụkọ 1: PhotoScape
Photoscape bụ a fun na mfe foto edezi software na-enyere gị idozi ma welie photos ngwa ngwa. N'adịghị ka n'ozuzu foto editọ, ọ e ekewa n'ime ọtụtụ modul: Photo onyenlereanya, Photo Editor, ogbe Editor, Page, Ikpokọta, Animated GIF, Raw Ntụgharị, Face Search na ndị ọzọ. Isi foto edezi ọrụ na-anakọtara na Editor, gụnyere resizing, agba ukpụhọde,-acha ọcha itule, backlight mgbazi, okpokolo agba, na-agbakwunye ederede, na-eru foto, red anya mwepụ, wdg Anyị na-eche na ọ bụ ihe kasị mma free foto nchịkọta akụkọ maka beginners.
Best free foto nchịkọta akụkọ 2: Paint.net
Paint.net na-malitere mmepe dị ka ihe Undergraduate mahadum agadi imewe oru ngo mentored site Microsoft, zubere ya na mbụ dị ka a free ọzọ ka Microsoft Agba software na-abịa na Windows. Otú ọ dị, o toro n'ime a dị ike ma dị mfe foto edezi software. Paint.net atụmatụ ihe kensinammuo na otutu ọrụ interface nkwado maka n'ígwé, pụrụ iche mmetụta, na a dịgasị iche iche nke bara uru ma dị ike foto edezi ngwaọrụ.
Best free foto nchịkọta akụkọ 3: GIMP
The GIMP bụ achọghị ịzụ ike kacha ike na ọkachamara free foto edezi software maka Windows, na-emekarị-ewere dị ka free ọzọ ka Photoshop. GIMP bụ a bitmap / pixel dabeere image mkpachapụ usoro ihe omume foto edezi na retouching, nke awade isi na elu image edezi ngwaọrụ - sere, na-eru na nhọrọ ngwaọrụ, n'ígwé na ọwa nkwado, nhọrọ masks, agba mgbanwe, ụzọ, wdg GIMP nwere ike ike aka n'ígwé, nzacha, na scripts.
Best free foto nchịkọta akụkọ 4: Photo naa Pro
Photo naa Pro bụ a free foto nchịkọta akụkọ na elu atụmatụ na a onye ọrụ-enyi na enyi interface nke na-enyere gị na-arụ ọrụ mmuo. Ọ na-eji na-a azụmahịa foto nchịkọta akụkọ ugbu a aghọwo a free foto edezi software. Akpaka ngwaọrụ maka foto ịrụzi ma rụọ ọrụ, ngwá ọrụ maka edezi na-agbanwe agbanwe na agba na textures, nzacha, wdg na-nyere.
Best free foto nchịkọta akụkọ 5: VCW VicMan si Photo Editor
VCW VicMan si Photo Editor awade nza nke sere na-edezi ngwá ọrụ na yiri Adobe Photoshop. Text ngwaọrụ, gradients, agba nnọchi, foto pụrụ iche utịp, wdg na-niile nyere na-ewetara gị photos na-esonụ larịị.
Mgbe amụta banyere ihe ndị a kasị mma free foto editọ Windows, ị nwere ike họrọ onye na-amasị na-azọpụta ego na foto edezi. Ọ bụrụ na ị na-achọ tupu foto edezi software, ị nwere ike na-atụgharị Photoshop.
Ọ bụ mkpebi amamihe dị na imelite ka windows 10 ugbu a (mgbe July 29th)
Atụmatụ na iji Jiri VLC on a Windows Phone
Ihe niile ị chọrọ ịma banyere windows disk format
Olee otú esi na-eji Windows Live Movie Onye kere
Olee otú Mepụta na Nyefee iPhone Ringtone